ဖုန်းထဲမှာ ထည့်တဲ့ SIM Card တွေက eSIM တွေပဲဖြစ်လာတော့မလား? – MyTech Myanmar
ဖုန်းထဲမှာ ထည့်တဲ့ SIM Card တွေက eSIM တွေပဲဖြစ်လာတော့မလား?
ယခင်ထဲကစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ SIM Card တွေကို Mini SIM ၊ MicroSIM ၊ Nano SIM စသဖြင့် တဖြည်းဖြည်းအရွယ်အစားကိုလျော့ချပြီး ဒီ စမတ်ဖုန်းကိုယ်ထည်ထဲမှာ အခြားသော Processor နဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးထည့်လာနိုင်အောင်ပြုလုပ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Chip Design Company ဖြစ်တဲ့ ARM ကနေ Processor Chip အတင်းမှာ SIM ကိုထည့်သွင်းထားနိုင်တဲ့ iSIM လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2018-05-14T09:24:56+06:30May 14th, 2018|Mobile Phones|